Indawo Geographical, labantu endaweni eJalimane. Amaqiniso ethakazelisayo isimo
Germany - isimo yesimanje nangokwezimali athuthukile eYurophu Ephakathi. Yini ephawulekayo kuleli zwe? Iyini indawo eJalimane? Futhi amaJalimane unesithakazelo? Izimpendulo zale mibuzo zingatholakala ku-athikili yethu.
indawo German: endaweni kanye indawo
Izwe likabhiya, ibhola kanye pedantry itholakala maphakathi Europe, ngaphakathi inamagquma plain-Central European. Ufana imingcele namanye amazwe ayisishiyagalolunye, futhi enyakatho it is wageza ngasemanzini ozolile aseBaltic kanye North Pacific.
Yiziphi izibalo ibalwa labantu kanye endaweni eJalimane? Ngokushesha Ukukhuluma kuwufanele sokuthi leli lizwe phakathi abaholi eYurophu ngokuya ngalezi zinkomba ezimbili.
Le ndawo ingqikithi Germany kuyinto 357.000 amakhilomitha square. Cishe yonke indawo salo esihle ekuphileni nemisebenzi sabantu somnotho (ngaphandle kwezifunda zezintaba of the lwaseBavaria Alps eningizimu-mpumalanga). Isimo sezulu esipholile, nokuqukethwe kwalo umswakama kuyehla ne kusengaphambili empumalanga eningizimu-mpumalanga.
Ubude ingqikithi isimo imingcele German - 3785 km. Umkhawulo omude kunayo yonke - ne-Austria, futhi emfushane - ne Denmark.
Ezomphakathi umnotho: izici jikelele
Ukulahlekelwa eMpini Yezwe II, iJalimane lobuNazi wawuhlukaniswe waba yizingxenye ezimbili: entshonalanga (FRG) nasempumalanga (GDR). Kulesi sikhundla, amaJalimane abaye baphila iminyaka engu-40, kuze kube yilapho November 9, 1989, lapho kuwa abadumile uDonga LwaseBerlin. Kwenzeka inqaba, endaweni esentshonalanga eJalimane kwaba cishe ngokuphindwe kathathu ngaphezu esempumalanga ndawo.
Namuhla, Germany inabantu abangaba yizigidi ezingu-85. Minyaka yonke, abacwaningi bamanani ulungise, noma okuncane, kodwa zonke efanayo ukwanda kwabantu - mayelana 0.1%. Germany ingenye yezindawo zokuqala emhlabeni ngokuya yokuphila yasedolobheni. 7% kuphela izakhamuzi zakhona bahlala emaphandleni. emadolobheni wezwe ngobukhulu - Hamburg, Munich, Berlin, Cologne futhi Farnkfurt am Main.
Germany Modern - athuthukile kwezomnotho kanye nesimo enamandla, kwelinye lamazwe amahlanu uhola ngokwemibandela GDP. Isisekelo emnothweni kazwelonke kusekelwe Imikhakha emine: umshini wokwakha, amakhemikhali, electrical kanye namalahle. Germany igcina isikhundla salo ehamba phambili emhlabeni emotweni nokuthengiswa.
5 Amaqiniso Okumangalisayo mayelana Germany
Izivakashi izivakashi yezwe European, njengoba umthetho, umxhwele kakhulu futhi kakhulu kuthinta okulandelayo:
Izwe uhlanzekile kakhulu futhi zigcinwe kahle. endaweni ejwayelekile ezisemadolobheni eJalimane - kuyinto kukhanye endaweni ekhuhla ngaphandle udoti, usikilidi imikhawulo noma amathe. Kuleli zwe, ngisho zikhumule izicathulo zakho endlini - ahlanzekile ngakho futhi sahlanza Emigwaqweni yasemadolobheni German.
German nesiNgisi eduze okwakuthandelene eJalimane. Kukhona ngisho eside olukhethekile kolimi: "denglisch". Das ist esimangazayo! - imishwana enjengethi athandwa kakhulu ngolimi olukhulunywa yama-Jalimane.
NgeSonto e-Germany - ngempela usuku olungcwele. "Ongcwele" ngokuya ukuphumula futhi aziphumulele. Ngalolu suku, ingxenye enkulu boutiques isiJalimane, zezitolo ngisho zokudlela awasebenzi.
Ezikoleni German kuyinto engavamile kakhulu (ngoba abantu Russian) ukuhlolwa uhlelo: amaphuzu aphezulu - a "iyunithi" kanye isilinganiso okubi kakhulu - a "6".
Ngokwengxenye enkulu, eJalimane awukwazi ukusebenza futhi siphile usizo lomphakathi wombuso. Kodwa amaJalimane banamahloni engasebenzi. Futhi ungathandi inkululeko yokushintsha indawo yomsebenzi.
Okuncane isimo sengqondo amaJalimane
Azikhandlayo, ukugcina isikhathi, lokujeziselwa ... Lona kangaki ukukhuluma mayelana amaJalimane. Ngakho ezithakazelisayo futhi umxhwele ukuqedela indaba yethu, ukukunikeza 10 amaqiniso ethakazelisayo nomqondo ka-yesimanje German:
AmaJalimane kakhulu sensitive imithetho neziqondiso, bathi kulelizwe yokuwela yabahamba ngezinyawo ungahamba ngokuphepha ngamehlo akho ivaliwe;
eJalimane, ngisho abacebile abadala bahlalela izindlu aqashiwe noma ezindlini;
amahlaya German wehlukile US noma, mhlawumbe nje, Russian;
AmaJalimane ngendlela emangalisayo kunzima ukubiza umsindo "s";
obubanjelwe eJalimane bavame kakhulu indawo sandwich ezivamile (ham, ushizi, noma imifino); sakusihlwa lapha kubizwa ngokuthi - Abendbrot ( «kusihlwa isinkwa");
Okuxakayo ukuthi, kodwa ethandwa kakhulu kuleli zwe, ukudla emgwaqweni - doner kebab;
AmaJalimane - isizwe yezemidlalo kakhulu kalula lapha ukugijima, ukubhukuda futhi ngebhayisikili, ngenkuthalo ukudlala ibhola, bowling kanye handball;
isilinganiso seminyaka yobudala lokuzalwa yokuqala abesifazane German: iminyaka 29-32;
eJalimane kunzima kakhulu ukuhlangabezana owesifazane German e High Heels;
AmaJalimane cishe musa ukulungiselela isobho lethu evamile, kodwa isinkwa kudliwa enkulu (futhi zonke izinhlobo kungenzeka nomumo).
357 021 - lena indawo eJalimane ngekota. km. Izwe itholakala engxenyeni ephakathi ye-Europe kanye has a esidayisa ebanzi lapho waya olwandle. Namuhla kuba impela enamandla kanye nesimo athuthukile. Germany - omunye wabadlali ezinkulu e-EU, iyingxenye "Big Seven» (G7) kanye uqhosha indinganiso ephakeme kakhulu yokuphila izakhamuzi zakhona.
Isingeniso ukuze kwezilwane: izilwane nongenanembeza - ubani lo?
Izinhlobo esisemthethweni ibhizinisi isitayela, futhi ngokwehlukahlukana kwabo
Uyini isilondolozi. Umqondo USB. Indlela yokusula inqolobane e-Opera